उनले नबुझेको भ्यालेन्टाइन डे र रातो टिसर्ट !!
उनलाई भयालेनटाइन डे भन्ने के हो थाह थिएन, सानै उमेरमा बिबाह गरेकी उनले सुगम ठाउँमा भए पनि न उसको कुनै प्रेमी थियो ।
श्रीमानले कुनै डे भनि माया गरेको समझना नै छ उनलाई । त्यो कलिलो उमेरमा अहिले को जस्तो डे अथवा बर्षगाठहरु मनाउने प्रचलन भएको भए सायद कान्छी ले बर्षमा एक दिन माया पाउथिन३ होला !
समयको गतिशिलता तथा घरायशी जीवनसँगै कान्छीको जीवनमा दुई मुना को आगमनले केही हदसम्म मल्हम लगाउने काम गरेको थियो । घरको खस्कदै गएको आर्थिक अवस्था, दुई मुनाको भविष्य ,घरेलु हिंसा र श्रीमान को गैरजिम्मेवारपन ले आजित कान्छी आफना मुनाहरुको उज्ज्वल भविष्य को लागि शहर छिर्छे । शहर पसे लगतै रेडियोमा बैदेशिक समाचार को विज्ञापन सुनेर वैदेशिक रोजगार लैजाने मेनपावर तथा शहरी जीवन बिताइ रहेका शुशील ब्याक्तित्वहरुसँग भेट हुन् पुगछिन् र बैदेशिक रोजगारमा होमीने सुर कस्छिन् ।
वैदेशिक रोजगारमा लैजाने मेनपावरका ढोका घच्घचाउदा केही शहरिया जीवनसँग नजिक भएका साथीभाईहरुसँग भेट हुन पुग्छिन् ।
शहरमा घर हुनेले र पढ्न शहरमा बस्ने अधिकांश युवा युवतीले भ्यालेन्टाइन डे मनाउने कुरा कान्छीले त्यसपछि मात्र थाहा पाउँछिन् ।
यो कस्तो खालको पर्व रहेछ ? कान्छि पहिलो पटक चकित हुन्छिन् र साथीहरुलाई सोध्छिन् ।
आफूलाई कसैले माया वा सहयोग गरेको छ भने आजको दिन उपहार दिनु पर्छ, अनि झन् माया सहयोग बढ्छ ! कान्छीकी साथीले उनलाई सुनाइन् ।
साथीले भ्यालेन्टाइन डे बारे व्याख्या गरेपछि कान्छीले आफूलाई सहयोग गर्ने सहयोगी हातको स्मरण गरिन् । उनको मनमा आफूलाई माया गर्ने भन्दा सहयोग गर्नेको स्मरण बढी भयो ।
गाउँघर आटी छाप्दा होस् या मेला पर्व वा दुर्घटना हुँदा सहयोग गरेको सम्झ्दै कान्छीले त्यस्तै सहयोगीलाई दिनका लागि रातो टिसर्ट किनिन् ।
गाउँमा जस्तै सहयोगी भावना भएका एक युवालाई उनले सम्पर्क गरिन् र साथीलाई लिएर ती पुरुषसँग खाजा खानको लागि निस्किइन् ।
आजसम्म कसैलाई उपहार नदिएकी कान्छी लाजले रातोपिरो भइन् । खाजा खाएपछि उनको साथीले गिफ्ट बारे स्मरण गराएपछि कान्छी झसंग भइन् ।
किनकि नत यो आफ्नो सस्कार मा थियो न त कोहि बाट परिवारमा यस्तो चाड को बारे मा सुनेकी अथवा सिकेकी थिइन् कान्छीले ।
साथीले स्मरण गराएपछि पुरुष साथीपनि अफ्टेरो मानिमानि गिफ्ट लिन तयार भए । पुरुष मित्रलाई थाहा थियो भ्यालेन्टाइ डेमा प्रेम जोडीले गिफ्टको आदानप्रदान गर्छन् भन्ने । आफूहरुबीच प्रेम समबन्ध नभएका कारण उनी पनि अफ्टेरोमा परे ।
आफूहरुबीचको प्रेम प्रणय दिवसमा युगल जोडीले मनाउने भ्यालेन्टाइन जस्तो नभएकोमा युवक स्पस्ट थिए ।
जब प्रणय दिवस आउँछ तब आज भन्दा ११ बर्ष अगाडिको त्यो दिन र त्यो रातो टिशर्ट ले कान्छीलाई गिज्याई रहन्छ अहिले को कान्छीले र त्यो बेला उपहार दिने कान्छीले नबुझेको प्रणय दिवसको आगमनसगै रातो टिशर्ट सम्झीरहन्छे !!
(कसैको वस्तविक जीवनसँग मेल खाए संयोग मात्र हुनेछ ।)
लेखिका सरिस्मा बराल [उमा] हाल इजरायल